बजार अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय तह- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
बजार अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय तह
चार महिनाको एक पटक बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ
भाद्र २६, २०७८ तृप्ति शाही
बैतडी — संघीय संरचनामा बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो । चार महिनाको एकपटक स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई अनुगमन प्रमुखको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । तर बैतडीका स्थानीय तहले भने बजार अनुगमन गर्दैनन् ।
६ गाउँपालिका र ४ नगरपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले बजार अनुगमनमा चासो देखाएका छैनन् । वर्षको एकपटक पनि यहाॅका पालिकाले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । आजभोलि बजार अनुगमन गर्न नसकिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले बताइन् । वर्षको एक/दुई पटक मात्र अनुगमन गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार पालिका स्थापना भइसकेपछि पालिकाकै आयोजनामा अहिलेसम्म बजार अनुगमन गरिएको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको टोलीसँग संयुक्त रूपमा २ पटक मात्र अनुगमन गरिएको उनको भनाइ थियो । आफ्नै गाउँको बजारमा अनुगमन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् । तिनै जनताले दिएको भोटबाट निर्वाचित भएकोले उनीहरूकै पसलहरू अनुगमन गर्न गाह्रो हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
निर्वाचित भइसकेपछि ३ पटक मात्र अनुगमन गर्न सकिएको मेलौलीकी उपप्रमुख राधा ओझा बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई अनुगमनको संयोजक तोकिदिएको छ । हाम्रो मात्र जिम्मा हो सोच्छन् अरूले । हामीले मात्र पनि त सम्भव छैन ।’ अनुगमन समिति खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताइन् । समितिको बैठकै बस्न नसकिने अवस्था रहेको उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘अनुगमन समितिमा सबै स्थानीयस्तरमा काम गरिरहेकाहरू हुने भएकाले पनि काम गर्न सकिएको छैन । सबै चिनजानकै नजिकको भएकोले गाह्रो भएको छ ।’ आफूहरूले जनचेतना फैलाउने कार्य भने गरिरहेको उपप्रमुख ओझा बताउँछिन् ।
दुर्गममा रहेको सिगास गाउँपालिकाले पनि अनुगमनको कार्य गर्न सकेको छैन । शिवनाथ गाउँपालिकाको अवस्था पनि यस्तै छ । गत वर्षबाट अनुगमनको कार्य हुन नसकेको उपाध्यक्ष कुश्मा चन्दले बताइन् । ‘हाम्रो पालिकातिर धेरै ठूलो बजार पनि छैन । गुनासाहरू आएकाले एकपल्ट गरेका हौं । सानो र स्थानीय बजार भएकोले अनुगमन गर्नुपरेको छैन,’ उनले भनिन् ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि बजार अनुगमनमा चासो देखाउँदैन । स्थानीय प्रशासन र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अनुगमनका पालिकाकाले सहभागिता मात्र देखाउने गरेको छ । स्थानीय बजारमा अनुगमन नहुने भएकाले व्यापारीहरूको मनपरी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । म्याद नाघेका सामग्रीहरू व्यापारीले बेच्ने गरेका दोगडाकेदार गाउँपालिका—७ का स्थानीय भुवन कार्कीले बताए ।
महँगोमा बेच्ने व्यापारीहरू पनि धेरै रहेका उनले बताए । जनप्रतिनिधिहरूको लापरबाहीले सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका उनको भनाइ थियो । सदरमुकाम क्षेत्रका बजारहरूमा प्रशासनले अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि सबै पालिकाका बजारमा सम्भव नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई पनि बजार अनुगमन गरेर नियमविपरीतको कार्य गरेको खण्डमा कारबाही र सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।’
प्रशासनमा जनशक्ति कम भएकाले सबै पालिकाका बजारमा पुग्न नसकिने उनले बताए । गुनासाहरू आएको खण्डमा भने पुगेर अनुगमन गर्ने गरेको उनले बताए । पछिल्लो पटक यही जेठ ८ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाका मुख्य बजारका १ सय २६ पसलमा अनुगमन भएको थियो । जसमा ५६ पसलले म्याद नाघेका सामानहरू बिक्री गर्ने गरेको पाइएको थियो । दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पसलहरू पनि १७ वटा भेटिएका थिए । यिनीहरू कसैलाई जरिवाना तिराएको र कसैलाई चेतावनी दिइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ १२:५०
बैतडीमा स्क्रब टाइफसका बिरामी बढे
अस्पताल आउने ज्वरोका प्रत्येक बिरामीको परीक्षण गर्दै
भाद्र १९, २०७८ तृप्ति शाही
बैतडी — पछिल्लो समय बैतडीमा स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या बढेको छ । वर्षायामको सुरुबाटै बिरामीको संख्या बढेको हो । विगतका वर्षमा फाट्टफुट्ट मात्र देखिए पनि यो वर्ष स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या धेरै रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये दैनिक चार जना जतिलाई स्क्रब टाइफस देखिने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले बताए । उनले भने, ‘केही समयअघिबाट दैनिक देखिने गरेका छन् ।’ जिल्ला अस्पतालबाट रेफर गरेका केही बिरामीहरूमा डेंगु पनि देखिएको अस्पतालले बताएको छ ।
केही स्क्रब टाइफसका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशी बताउँछन् । ‘अनिवार्य परीक्षणले पनि बढी देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘अस्पताल आउने ज्वरोका प्रत्येक बिरामीमा क्रब टाइफसको परीक्षण गरिरहेका छौं ।’ यस्तै जिल्लामा भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या पनि बढेको छ । जिल्ला अस्पतालमा मात्र दैनिक २५ भन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका अस्पतालले जनाएको छ । भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका ज्वरोका बिरामीहरू पनि छन् । दिनमा ५ जनासम्मलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको सूचना अधिकारी पन्त बताउछन् ।
यस्तै जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या धेरै छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ मा रहेको पञ्चेश्वर स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज सुरेश सार्कीले बताए । उनका अनुसार दैनीक २० जनाभन्दा बढी ज्वरोकै बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भाइरल ज्वरो देखिएको उनले बताए । शुक्रबारसम्म मात्र १७ जना ज्वरोको बिरामी चेकजाँच गरेको उनको भनाइ थियो । वर्षात्को समयमा फोहर पानीको प्रयोग र गाउँमा कामकाजका बखत पानीमा धेरै समय भिज्न पर्ने बाध्यता रहेकाले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको हुन सक्ने उनले बताए ।
केही दिनयताबाट आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू अघिपछिको तुलनामा धेरै आउन थालेको पुरचौडी नगरपालिका–४ को भटना स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज रोहित धानुक बताऊँछन् । असारबाट सुरु भएर असोजसम्म भाइरल ज्वरो जस्ता रोगहरूको प्रकोप देखिने गरेको जिल्ला अस्पतालका डा. जोशी बताउँछन् ।
वर्षातमा पानीका मुहानहरू सफा नहुँदा पानीजन्य रोगहरू देखापर्ने गरेको उनले बताए । यो समयमा किर्नालगायतका किराहरूले टोक्ने भएकाले स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू पनि देखिने गरेका उनी बताउँछन् । स्क्रब टाइफसले ज्यानै लिन सक्ने भएकाले परीक्षणको दायरा बढाएर उपचार गरिरहेको डा. जोशीले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७८ ११:१५